Ogaden News Agency (ONA) – Ogeysiis Mudaharad ka dhacaya South Afrika magalada Pretoria 24 May
Ogeysiis Mudaharad ka dhacaya South Afrika magalada Pretoria 24 May
Banaanbax xooggan ayaa waxaa lagu wadaa innuu ka dhaco wadanka South Afrika Bishan May 24 teeda oo ku beegan maalinta Khamiista ah. banaanbaxan ayaa waxa looga soo horjeeda Xasuuqa ka jira dhulka Ogadeniya.
Wadanka South Afrika ayaa ah wadan dhowaan laga furay kiis lagu soo oogayo danbiilayasha geystay xasuuqa kasocda Ogadeniya oo isugu jira mid bani aadanimo iyo mid ka dhan ah sharciyada daggaalada ee ku qeexan xeerarka caalamiga ah. Waxaa hadaba Jaaliyada JOKA ee somalida Ogadeniya geed dheer iyo mid gaabanba u fuuleen sidii ay danbiyadaas ugu caddeyn lahaayeen dowlada Sii dhacaysa ee Ethiopia.
Waxaa sidan lawada socono Banaanbax xoog badan ka dhacay wadanka USA oo lagu ceebeyay kaligi taliye Zenawi. Waxaa sidoo kale lagu wadaa banaanbaxyo aad u xoog badan inay ka dhacaan Qaarada Europe todobadadan fooda inagusoo haya.
Banaanbaxa ka dhici doona South Afrika ayaa la rajeynaya in tiro aad u xoog badan lagu tago, iyada oo waliba si dag dag ah lagu qorsheeyay sida ay noo sheegeen masuliyiin ka tirsan jaaliyada JOKA
MUUQAALADI BANAANBAXI USA CAMP DAVID: